Ogaden News Agency (ONA) – Deg Deg: Dibadbaxyo Wayaanaha Lagaga Soohorjeedo oo Australia Kasocda.
Deg Deg: Dibadbaxyo Wayaanaha Lagaga Soohorjeedo oo Australia Kasocda.
Maanta oo Talaado ah taariikhduna ay kubeegantahay 27/3/18 waxaa magaalada Melbon wadanka Australia ka socda Mudaharaad balaadhan oo lagaga soo horjeedo dhaqanka xun ee xukuumada wayaanuhu ay kuhayso shucuubta ay gumaysato.
Mudaharaadkan oo aad ubalaadhan waxaa si wada jir ah usoo qaban qbiyay Jaaliyadaha Ogadenia iyo Oromia ee kudhaqan wadanka Australia, waxayna dibad baxayaashu muujiyeen sida ay uga xunyihiin gumaadka kasocda wadankoodii.
Dibad baxa ayaa lagaga soo horjeedaa xukunka ciidan ee xaaraanta ah ee wadanka lagusoo rogay iyo sida loogu dheelayo maxaabiista uxidh xidhan xukuumada wayaanaha.
Dibad baxayaasha ayaa sitay boodhadh ay kuqoran yihiin eroyo muujinaya sida ay uga xun yihiin ciidamada wadanka lagu fasaxay ee awooda loosiiyay in ay dadka xasuuqaan, waxayna dibad baxayaashu wateen sawiradii dadkii laxasuuqay.
Dhinaca kale dibad baxayaasha ayaa dowlada Australia iyo siyaasiyiinta kale ee caalamkaba usheegay in siwayn loobah dilo maxaabiista gacanta ugu jirta xukuumada wayaanaha, kuwaas oo iyagoo xabisan aduunka loosheego in lasiidaayay.
Dibad baxayaasha ayaa ugu dambayntii hortagay xarunta baarlamaanka ee Gobolka Victoria waxaana usoo baxay xubno katirsan baarlamaanka wadanka Australia, waxayna xubnaha baarlamaanku dhagaysteen cabashadii dibad baxayaasha iyagoo sheegay in ay dowlada gaadhsiin doonaan cabashadooda, sidoo kale na xubnaha Baarlamaanka ayaa balan qaaday inay kaga hadli doonaan arimahan kulanka dhici doonaa 28 bishan Xarunta baarlamaanka ee wadanka Australia.
Banaanbaxa oo wali kasii socda qaybo magaalada kamid ah lasoco faahfaahintiisa.